Haier Iron Bluetooth Review na Spanish | Gam akporosis
Anyị na-aga n'ihu na nyocha nke ngwaọrụ gam akporo ọhụrụ, na nke a nwere gadget, smart watch ma ọ bụ Smartwatch Bluetooth Na ọnụahịa dị ọnụ ala ma dịkwa mma iji nye onyinye n'ụbọchị ndị eze atọ ahụ na-abịarute.
Ngwaọrụ ahụ abụghị onye ọzọ Igwe Igwe Iron gịnị ka anyị ga-enweta site n'otu uzo a maka ịrịba price nke Euro 42,47, ọnụahịa a na-akwụghị ụgwọ ọ bụla ọzọ ma ọ dịghị ihe na-erughị 54% nke ọnụahịa ya. Ndị a bụ nkọwa niile nke Bluetooth Smartwatch a dị ala dị ọnụ ala na ọ gụnyere ọbụna a arụ ọrụ obi ọnụego ihe mmetụta.
1 Nkọwapụta teknụzụ Xier Iron Iron
2 Ihe kachasị mma nke Haier Iron Bluetooth
3 Ihe kacha njọ nke Haier Iron Bluetooth
Nkọwapụta teknụzụ Xier Iron Iron
Ihuenyo LCD 1'54 »240 x 240 pikselụ
Igwefoto Ebute ụzọ
Atụmatụ ndị ọzọ Pedometer - Mkpu - Ihe mmetụta ụda obi - Mkpụrụ ogo ụra - Kalinda - Appma ọkwa nke ngwa - Installwụnye ngwa nke gị. Nkwupụta nke SMS na Oku - Ike ịme ma nata oku site na ngwaọrụ ahụ n'onwe ya - Njikwa egwu - at Kwekọrọ maka gam akporo na iOS -
Batrị Ngwakọta lithium polymer
Akụkụ X x 49 41.5 10.9 mm
Ibu ibu 82 grams
Ahịa Euro 42'47
Ihe kachasị mma nke Haier Iron Bluetooth
O doro anya na ndị kasị mma nke Igwe Igwe Iron Anyị na-ahụ ya na ọnụ ala ya dị oke ọnụ ahịa yana n ’ihuenyo 1,54 ″ LCD dị egwu na mkpebi nke 240 x 240 pikselụ nwere ihe na-adọrọ adọrọ nke na-egbuke egbuke maka iji ọnọdụ ọ bụlaỌbụlagodi na anwụ na-enwu gbaa anyị agaghị enwe nsogbu iji arụmọrụ niile nke Smartwatch a dị ọnụ ala.
N'aka nke ọzọ, batrị lithium polymer ya agwakọrịrị nke nwere ike zuru ezu n'ime otu awa, na-enye anyị a obodo kwụụrụ ruo awa 72 na njikere ma ọ bụ kwụrụ na ruo mgbe 8 awa nke obodo kwụụrụ na oku.
Ọzọ mgbe na ihu ọma nke a na-akpali akpali aku na uba Smartwatch, ọ na-eweta ya na nwụnye nke ngwa nke aka gị iji chịkwaa arụmọrụ niile elekere na-enye anyị ma chekwaa akụkọ ihe mere eme nke mgbatị anyị, usoro anyị jere ije na ọbụnakwa na-ejikwa ngwa ndị anyị chọrọ ịnata nkwuputa ngosi na nkwojiaka anyị. Ificationsfọdụ ificationsma Ọkwa na-ekwe ka anyị gụọ ozi ndị natara na akaụntụ WhatsApp anyị ọbụla na ịnweta mkparịta ụka zuru oke nke kọntaktị na-eziga anyị ozi ahụ.
Iju ihie dị egwu
Ngwa nke na-arụ ọrụ zuru oke
Ihe kacha njọ nke Haier Iron Bluetooth
N'iburu n'uche ọnụahịa nke Smartwatch Bluetooth a na-akpali akpali, n'ụzọ ezi uche dị na ya, anyị enweghị ike ịrịọ maka otu ọrụ ahụ nke Smartwatch na sistemụ arụmọrụ gam akporo na-enye anyị, ọ bụ ya mere na mgbe ụbọchị ole na ole na-ekiri elekere anya, naanị ihe m hụrụ na ọ dị njọ ma ọ bụ na-adịghị mma, bụ nsonye nke nhọrọ na-enye anyị ohere, ozugbo ejikọtara anyị na Smartphone, nwee ike iwepu ya ngwa ngwa mgbe ị na-anata oku na-abata mgbe anyị nọ ebe anyị na-enweghị nzuzo na anyị enweghị mmasị ka a nụ mkparịta ụka anyị na onye okwu ike nke Haier Iron Bluetooth.
Enweghị njikọ ngwa ngwa n'oge oku
Igwe Igwe Iron
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Haier Iron Bluetooth, ezi bluetooth Smartwatch nke karịrị naanị euro 40
Nyochaa dị ezigbo mma, mana enwere m ajụjụ, ọ na-enye ike akpaaka na ihuenyo yana mmegharị ahụ?
Zaghachi Jose Carlos ElChaos
onye ma ka esi agu WhatsApp na elekere, ha aputa ma ha apughi igu ha
Ọ bụrụ na ị nwere ike imebi ngwa ngwa n'oge oku, mgbe ha kpọrọ gị na mkpanaka m, ọtụtụ windo na-egosi na ala, keyboard, kọntaktị, ọkà okwu, Bluetooth, ị na-emetụ bọtịnụ Bluetooth aka ma ị na-ekwu naanị na mobile.
Kedu ka m ga-esi nweta mkparịta ụka WhatsApp? Mgbe m natara ihe karịrị ozi abụọ, enweghị m ike ịgụ ha, agbanyeghị na telegram m nwere ike.
Zaghachi David Plaza Urda
I meela nke ukwuu maka ozi ahụ, nkwuputa ụda na-eme ka m ghara iwe iwe ma amaghị m windo ndị ahụ. Echiche kacha mma.
Zaghachi Petunia Pérez
Amaghim ka esi agu ha, ị dozie ya?
Ana m ebudata Fudo eyi na mgbe m wụnye ya, enwetara m njehie 503 iji hụ ma ọ bụrụ na otu ihe ahụ eme na otu esi edozi ya, ekele
Ugbu a, m ga-esi njehie 505 mgbe ị na wụnye «Fundo eyi»
Kedụ ka m ga-esi mekọrịta ozi ekwentị m na elekere?
M tinyere ya na-akwụ ụgwọ na mgbe ihe karịrị 8 awa ọ na-aga n'ihu odori na batrị mmanya adịghị jupụta. Mgbe ihe karịrị awa iri na ise na-akwụ ụgwọ, m hụrụ na ogwe osisi anaghịzi akwagharị kama ọ bụ na nke atọ. Akpọtụrụla m weebụsaịtị ebe m zụrụ ya, mana ị nwere echiche ọ bụla? Somethingdị ihe ahụ ò metụla gị?
Zaghachi Manuel Jesus Benìtez Ortiz
Mgbe m nwetara ozi whatsapp 2 enweghị m ike ịgụ ha, naanị m na-agụ nke mbụ, ị ma ka esi edozi ya?
Facebook na-anwale ndepụta ndepụta News na ngwaọrụ mkpanaka